မလေးရှာရောက် ရခိုင် ဗမာ များအား မလေးရှား ကုလား၊မြန်မာ မွတ်စလင် များမှ ပုစိန်နှင့်ခုတ်မှု ~ ကိုးဒီသွေး
မလေးရှာရောက် ရခိုင် ဗမာ များအား မလေးရှား ကုလား၊မြန်မာ မွတ်စလင် များမှ ပုစိန်နှင့်ခုတ်မှု
Billion Versatle SDN.BHD (MI Ba Myatthar) စတိုး နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပိုင်ရှင်
ကိုသန်းလူ(ခ) မိုက်ကယ်ကို မလေးရှာနိုင်ငံ ဆလာရမ်းတွင်နေထိုင်သော ဇော်ကြီး နှင့် အဖွဲ့ က မလေးရှား စံတော်ချိန် ၆ နာရီ ပတ်ဝန်းကျင် ( ၈.၆.၂၀၁၂ ) နေတွင် ဇာမဏီဆိုင် ရှေ့ တွင့် ပုဆိန်နှင့် ခုတ်မှုဖြစ်ပွား ခဲ့ပါတယ်။
ကိုမိုက်ကယ်မှာ ပုဆိန်ခုတ်ခံရာ ဒဏ်ရာကြီးနှင့် ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပေ မဲ
့ ဒဏ်ရာအနေအထား အခြေအနေဆိုးရွှားကြောင်းသိရပါတယိ။ အရေးကြောင်းဆို မလေးရှားရောက်မြန်မာ များစည်းလုံးကြဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ကျွှန်တော်က မလေးရှား ကိုတာလာရာမှာ နေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ ထက်ပြီးအခြေနေထူးလျင် သတင်းထပ်မံပို့ပေးသွားပါမယ်။ လက်ရှိသဘောအရ ကိုတာလာရာ ကို အရေးကြီး case မရှိလျင် မလာကြဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။ကိုသန်းလူ(ခ)ကိုမိုက်ကယ် ဖုန်းများ
၀၁၂-၂၇၇၄ ၆၅၁၀၁၂-၂၆၆၃ ၉၅၅၀၁၆-၆၅၃၆၉၀၂၀၁၆-၉၀၄၀ ၁၂၂ရုံးဖုန်း၀၃-၆၂၇၄၆၉၅၂fax၀၃-၆၂၇၄၂၇၈၆8/6/2012 ညနေပိုင်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကိုမိုက်ကယ်ကြီး ပြသနာနှင့်ပတ်သတ်ပြီး 9/6/2012
12:00 နောက်ဆုံး သတင်း ပို့ပေးချက် အရ Malaysia နိုင်ငံ Penang မြိုမှ မွတ်ဆလင် များ ဗလီတတ်..ကျမ်းကျိမ်ခဲ့ပြီး.. Malaysia နိုင်ငံ၏ မြို့တော် KualaLumpur မြိုပေါ်သို့ ချီတတ်လာပါပြီ။ သူတို့ ၏ ကျမ်းကျိမ်ဆိုချက်များ ထဲမှာ ပြန်ပြောပြသူများ၏ပြောကြားချက်မှာ "ရခိုင်" မြင်လျှင် အကုန်သတ်မည် ဟုသိရှိထားရပါသည်။ "ဗမာ" လူမျိုးများမပါဟု ပြောကြားသွားပါသည်။ ရခိုင်လူမျိုးများ အလုပ်ခွင်တွင် ၁ ယောက်တည်း မနေဖို့ နှင့် လမ်းသွားလမ်းလာ
မထွက် သိပ်မထွက်ဖို သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ မလေးရှား အစိုးရ ပြောကြားချက်မျးအရ ဒီ case ကို စပြီးလုပ်တဲ့သူကို ဆော်မယ်လိုသိရှိရပါတယ်။ အခု ကိုမိုက်ကယ် ကြီး ပြသနာ မှာ မြန်မာမစစ် မွတ်စလင်က စခဲ့တဲ့အတွက် မြန်မာ မွတ်စလင်တွေ မချောင်ပါဖူး။ အခုအခြေနေရဆို မလေးရှားအစိုးရ က မြန်မာတွေဘက်က ရပ်တည်သွားလိမ့်မယ်လို မလေးဂျိုး ကိုယ်ရွေကိုယ်မျိုးတွေက ခန့်မှန်းရရှိပါတယ်။ ဘာ ပဲပြောပြော သတိနဲ့နေကြဖို ထပ်မံပြော အသိပေးအပ်ပါတယ်။
http://www.mmbloggers-malay.co.cc Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
phung bellaJuly 10, 2012 at 2:39 PMhi beautiful blog. We haveabig classified site in Myanmar. Please visit us back at: http://ads.com.mm/?cid=4fd60e51e4b0fa6db841e336&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_phung&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blogReplyDeleteAdd commentLoad more...
ထိုင်း-မြန်မာ(Live) ဘောလုံးပွဲကို ဒီမှာ ကြည့်ရှုနိုင်
ဒီဇင်ဘာ(၁၄)ရက် ညနေ ၈နာရီခွဲမှာ (မြန်မာစံတော်ချိန်) ယှဉ်ပြိုင်ကစားမဲ့ ထိုင်း- မြန်မာဘောလုံးတိုက်ရိုက်ပွဲကို ဒီမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ http:...
အမာခံကော်မတီများနှင့် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကို MKO အသစ်ပြန်လည်ရွေးချယ်မည်
ကရင့်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးနေ့အလွန် ဇန္န၀ါရီလ (၅)ရက်၊ ၂၀၁၄ နေ့တွင် မလေးရှား ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့အစည်း(MKO) အနေဖြင့် အမာခံကော်မတီဝင်များနှင့် အ...
ကာမရာဂ ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာ မွတ်ဆလင် တို့ကို ဒေါပွ စေခဲ့ သည့် ဇာတ်ကား ကို ရိုက်ကူး ခဲ့
ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့နယ် ရွှေကုက္ကိုမြိုင် ကျေးရွာတွင် ကရင်နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်လက်နက်ကိုင်များပူးပေါင်းစစ်ရေးပြအစီအစဉ်ဖျက်သိမ်း
15.DEC.2013 ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့နယ် ရွှေကုက္ကိုမြိုင် ကျေးရွာတွင် သုံးရက်တိုင် ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သော ကရင်နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်တွင် လက်နက်ကိုင...
ပြည်ပရောက် ကရင်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ လူမှုစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ OKRSO နာယကလူကြီးများ၏ အရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် BB OK by 9dblood SEA GAMES 2013 OPENING CEREMONY (LIVE)ယနေ့ ည ၆ နာရီ မှ ၁၁ နာရီအထိကျင်းပမည့် ဆီးဂိမ်းစ်ဖွင့်ပွဲအား တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန်
ယနေ့ ည ၆ နာရီ မှ ၁၁ နာရီ(မြန်မာစံတော်ချိန်)အထိ ကျင်းပမည့် ဆီးဂိမ်းစ်ဖွင့်ပွဲအား တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန်။ ဆီးဂိမ်းကို အိုးမဲသုတ်သူများ(သို့) မြန်မာပင်ကိုယ်စရိုက် အကျင့်ဆိုး
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်အတွင်း ဆီးဂိမ်း အားကစားပြိုင်ပွဲတွေထဲက တခုဖြစ်တဲ့ ဘောလုံး အားကစားပြိုင်ပွဲတွေ စတင် ကျင်းပပါတယ်။ ကစားပွဲထဲမှာ လာရောက်ကြည...
​ထိုင်း​အ​တိုက်​အ​ခံ​ခေါင်း​ဆောင်​ကို ​လူ​သတ်​မှု​ဖြင့် ​တ​ရား​စွဲ
​ထိုင်း​၀န်​ကြီး​ချုပ်​ဟောင်း ​အ​ဘီ​ဆစ် ၀ိ​ချာ​ဂျီဝ​ကို ​ဘန်​ကောက်​ရာ​ဇ၀တ်​ဆိုင်​ရာ ​တ​ရား​ရုံး​က ​လူ​သတ်​မှု​နဲ့ ​ဒီ​နေ့ ​တ​ရား​စွဲ​လိုက်ြ...
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နယူးယောက်ပြည်နယ် အော်ဘနီမြို့မှ ကရင့်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူး ဖိတ်ကြားစာ
Invitation Letter by 9dblood 9dblood@gmail.com. Powered by Blogger.
ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် လက်မခံဟု ၈၈ ကျောင်...
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်းတောမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော သ...
ဖျက်စီးခံရသော ရခိုင်ပြည်နည်မှ ကျေးရွာများ
ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂလီ တွေ အကြမ်းဖက် မှုကြောင့် သေဆုံး မှု ...
စစ်တွေ မှာ GTC ကျောင်းသား တစ်ဦး အသတ်ခံရ၊ မွတ်စလင်...
မြန်မာစစ်တပ်များ ဆိုင်းတောင်မြို့ထဲသို့ လက်နက်ကြီး...
ရှမ်း/မြောက်တွင်KIA နှင့် SSA-N ပူးပေါင်းကာ အစိုးစ...
ယူရို ၂၀၁၂ အုပ်စု (A) ပွဲကြိုသတင်းများနှင့် အင်္ဂလန်...
တသောင်းတန် ထုတ်မည်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ ပါမည်မဟ...
ဥပဒေ အကာအကွယ်မဲ့ရာမှ မွတ်ဆလင် ၁၀ ဦး တောင်ကုတ်တွင်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြမယ့် ငါးမင်းဆေ...
ဥရောပဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ (ပိုလန် – ယူကရိန်း)
ဆုံခရာ ပဋိပက္ခ မြန်မာ တဦးသေ (၁၂) ဦး ဒဏ်ရာရ
ဘင်္ဂါလီ ဗလီရှေ့တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ တောင်ကုတ်ကိစ...
မေခလာအဆိုနဲ့ အော်စီက ကရင်မိန်းမပျိုတို့အက
တောင်ကုတ်တွင် မွတ်စလင်(၁၀)ဦး အသတ်ခံရ (ကြောက်တတ်သူ...
မြန်မာနှင့် ကမ္ဘောဒီးယား ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားများ ရု...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ် အံ့သြဖွယ်...
စစ်တွေ အထိကရုဏ်း ဒဏ်ရာပြင်းထန်သူများရှိ
အမေရိကန် တွင် လူသား စားသည့် မှုခင်းများ ဆက်လက်ပေါ်ပေ...